कसरी बढाउने तौल ? यस्तो छ सजिलो काइदा !! | सुदुरपश्चिम खबर
कसरी बढाउने तौल ? यस्तो छ सजिलो काइदा !!
हामी तौल घटाउने चर्चा मात्र गर्छौं । बढ्दो तौल नियन्त्रण गर्नुपर्ने चुनौती जतिलाई हुन्छ, उत्तिनै कम तौलको कारण पीडितहरु पनि हुन्छन् ।
शरीरको उचाई अनुरुप तौल मापन गरिन्छ । उचाई र तौलको सन्तुलन मिल्नुपर्छ । यदि धेरै तौल छ भने, त्यसले अनेक रोग निम्त्याउँछ । कम तौल छ भने पनि त्यसलाई स्वस्थ्यकर मानिदैन ।
हामीले देखेका छौं, कतिपय व्यक्ति जति खाएपनि साह्रै खिरिलो हुन्छन् । दुब्ला–पातला हुन्छन् । हेर्दै टिठलाग्दो देखिन्छ । किन यस्तो हुन्छ ?
यस समस्याको पछाडि धेरै कारणहरु छन्, तर पौष्टिक र उच्च क्यालोरीयुक्त खाना खाएर यसलाई ठिक गर्न सकिन्छ । तीव्ररुपमा वजन बढाउनका लागि दैनिक आहारामा प्रोटीन र भिटामिन्सबाट भरपुर चिजहरु हुनुपर्छ जसले शारीरिक विकासका लाग पर्याप्त पोषण दिन सक्छन् ।
यसका साथसाथै यी भिटामिन्स र प्रोटिन्सले शरीरमा हार्मोन्स बनाउन पनि सहयोग गर्छन् । यसबाट यदि हार्मोन्सका कमिका कारण शरीर दुब्लो भएको हो भने पनि मोटाउन थाल्छ ।
आलुमा कार्बोहाइड्रेट्सको मात्रा भरपूर हुन्छ, जसले शरीरलाई जरुरी पोषण दिन्छ । यसका साथै यसमा स्टार्च, फाइबर र भिटामिन सी प्रचुर मात्रामा हुन्छ । त्यसैले आलु खानाले वजन छिटो बढ्छ । आलुको बोक्रामा पनि प्रोटिन हुन्छ । त्यसैले यसलाई राम्ररी सफा गरेर बोक्रासहित खानुपर्छ ।
अन्डालाई उच्च प्रोटिनयुक्त आहारा मानिन्छ । एउटा अन्डाको सेवनले शरीरमा लगभग ७० क्यालोरी प्राप्त हुन्छ । अन्डामा अत्यधिक मात्रामा प्रोटिन्स र मिनरल्स हुन्छ । अन्डाको पहेँलो भागमा फ्याट पनि हुन्छ । त्यसैले अन्डा खाँदा पनि वजन छिट्टै बढ्छ ।
पास्ता उच्च क्यालोरीयुक्त खानेकुरा हो । यसमा कार्बोहाइड्रेट्सको मात्रा पनि पर्याप्त हुन्छ । त्यसैले तौल बढाउने एउटा विकल्प पास्ता पनि हो । पास्तालाई अझै स्वस्थकर बनाउनका लागि यसमा फरक फरक प्रकारका प्रशस्तै तरकारी हाल्न सकिन्छ । रेड सस पास्ताको तुलनामा ह्वाइट सस पास्ता खानाले वजन तीव्ररुपमा बढ्छ ।
दुधमा क्याल्सियम र अन्य कयौं मिनरल्सहरु हुन्छन् जसले शरीरको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । तीव्ररुपमा वजन बढाउनका लागि हरेक विहान एक गिलास छाली लागेको दुध पिउनुस । ए गिलास दूधमा १३० देखि १५० क्यालोरी हुन्छ । यसका अलावा वजन बढाउनका लागि बटर पनि खुब खानुपर्छ ।
यदि छिटो वजन बढाउने मन छ भने काजू, किसमिस, बदाम र ओखरले सघाउनेछन् । यी चिजहरुबाट शरीरलाई उच्च क्यालोरी मिल्छ । यसमा अत्यधिक फाइबर र एन्टिअक्सिडेन्ट्स पनि हुन्छ जसले शरीरको रोग प्रतिरोधक क्षमतालाई बढाउँछ र विकासमा सहयोग गर्छ । (अनलाइनखबर बाट सभार)
यसरी बढाउनुहोस् पाचन क्षमता !!
स्वस्थ र फिट रहनका लागि खानैपर्ने कुराहरु !!